Amathiphu wokuhweba we-Binance Futures - Usebenzisa amandla we- Bitcoinxxo
Ngenyanga yokuqala yokwethulwa ngempumelelo kweBinance Futures, sinezinto ezingaphezu kwe-5x.
I-Binance isungule amandla okuzenzela avumela abasebenzisi ukuthi bakhethe amandla abawathandayo lapho behweba.
Abasebenzisi bangakhuphula ukusetshenziswa kwabo kufika ku-125x kulesi sibuyekezo!
Ngenyanga edlule, i-Binance Futures inikeze abasebenzisi amandla we-20x.
Ukuvuselelwa kwakamuva kukuvumela ukuthi usethe amandla afinyelela ku-1x noma afike ku-125x, ngokuya ngenani le-USDT ofuna ukuhweba ngalo, umkhawulo ohambisanayo kanye ne-tier kuzohluka.
Ngalesi sici esisha, asikho isikhathi esingcono sokujoyina i-Binance Futures okwamanje!
Dala i-Akhawunti ye-Binance Manje bese uthola Isaphulelo Sokuphila esingu-20% kuzimali!
Ukudluliselwa kwe-Binance 20% Code Off
Nazi izinto ezi-5 odinga ukuzazi ngokuthuthuka okukhulu okusha kwe-Binance Futures.
1. Khulisa isikhundla sakho sokuhweba usebenzisa amandla we-125x.
Enye yezinzuzo eziphambili zokuhweba ngeBinance Futures ukuthi isebenza kahle kakhulu ngemali. Emakethe yendawo, udinga ukubamba izinkulungwane ze-USDT ukuhweba i-1BTC, kepha ngeBinance Futures, ungavula imali encane. Futhi ukuphakama okuphezulu, imali encane ongayisebenzisa endaweni.
Ake sithi intengo yamanje ye-Bitcoin yi-10,000 USDT (ukubala okulula / ukuzimisela ukuba khona). Une-100 USDT, okuyiyona kuphela engathenga i-0.01 BTC kuphela. Kodwa-ke, uma udlulisela i-100 USDT ku-Binance Future, ungathengisa kuze kufike ku-125x amandla futhi uvule ukuthenga / okude noma ukuthengisa / izikhundla ezimfushane ezifika ku-1.25 BTC.
Ngale ndlela, ungathola inzuzo ephakeme kusikhundla se-1.25 BTC kunokuthi uma uthenge kuphela i-0.01 BTC ngenkathi usebenzisa imali encane ye-cryptocurrency yesikhundla esivulekile.
2. Ngakho-ke i-125x ingaba ngcono kune-20x.
Ake sithi ubambe i-100 USDT ngesonto eledlule lapho amandla wokusebenzisa ayengu-20x esikhundleni saleli sonto. (1 i-BTC yayiseyi-10,000 USDT) Indawo enkulu ongayivula kulesi simo kungaba yi-0.2 BTC.
Ake sithi uthathe isikhundla sokuthenga / sesikhathi eside kuzo zombili lezi zimo. Esikhathini esingaphansi kwehora, i-BTC inyuke isuka ku-10,000 USDT yaya ku-11,000 USDT. Esimweni esinamandla se-20x, isikhundla sakho eside se-0.2 BTC ngabe siholele ekukhuphukeni kwe-200 USDT (i-Binance Futures incane kakhulu kunabancintisana nayo). Kodwa-ke, ukuthatha isikhundla se-1.25 BTC esimweni esilinganisiwe se-125x kuzokhulisa inzuzo yakho ibe yi-1,250 USDT.
3. Isikhumbuzi somusa: Qaphela lapho uhweba ngamandla.
Khumbula: Imivuzo ephezulu iza nezingozi eziphezulu.
Intengo yeBitcoin ingaguquguquka ngokushesha, ikwenze kube yimpahla eguquguqukayo kakhulu. Njengoba amandla okuziphindaphinda ephindaphindeka, lapho umsebenzisi evula indawo yokuthenga / ende,
noma lapho uvula indawo yokuthengisa / emfushane,
Futhi kungangeza engozini nasekulahlekelweni okungahle kwenzeke lapho imakethe inyuka.
Ukhuluma ngobungozi obungakanani?
Kuzoba nephuzu elithile lentengo lapho isikhundla sakho sizoqedwa khona, futhi uzolahlekelwa yimali etshalwe kuleso sikhundla.
Isilinganiso esiphakeme senza izikhundla ezivulekile zingabi nemali eningi.
Isibonelo, isikhundla se-10,000 USDT sidinga kuphela imajini yokuqala engu-80 USDT.
Kodwa-ke, umkhawulo wokuqala ophansi ungaba inkemba esika nhlangothi zombili njengoba ukuguquguquka kwentengo kungadlula kude okufakwa kwemali komugqa.
Ngakho-ke, abathengisi kumele bagcine ibhalansi eyanele ezikhwameni zabo ukugwema ukuvalwa.
4. Kungakhathaliseki ukuthi uthanda kanjani ukuzikhethela, i-Binance Futures ixhaswa nguwe.
Njengoba kunikezwe izingozi ezihilelekile ekuhwebeni kwesikhathi esizayo, okubaluleke kakhulu kweBinance Futures ukuvikela abasebenzisi nokunciphisa ukulahleka okungaba khona.
I-Binance Futures inikeza ama-oda wokubamba, ukukhawulela ama-oda wenzuzo, nezinye izinketho ngaphambi kokuthi kufinyelelwe ukuvalwa kwemali, noma ngabe awubheki emakethe.
IBinance Futures ihlose ukuletha ukuhweba okuzayo okususelwa ku-cryptocurrency embonini, inikeze abasebenzisi ukuthula kwengqondo, noma ngabe bathatha izingozi ezinamandla kakhulu.
Ukuhweba okulinganiselwe kweBinance Futures kuqhutshwa yinjini eyingozi kanye nemodeli yokuqedwa enikezela abasebenzisi ngemiphumela esheshayo, efaka izici eziningi zokuphepha ezinikezela ngokuvikelwa okuphelele kuwe.
5. Nikeza ukusetshenziswa okwenziwe ngezifiso ngaphandle kokuphumula.
Ukuqaliswa kokusebenzisa ngokwezifiso kunikezwa ngomthelela ongekho isikhathi sokuphumula emakethe, ingqophamlando enkulu yethimba leBinance.
Sithanda ukuhlinzeka ngokuthuthuka nokuthuthuka kungxenyekazi yethu yokuhweba yangakusasa ngaphandle kokuphazamisa imisebenzi yethu yokuhweba.
Futhi ngakho konke ukuthuthuka esikwenzile ngenyanga edlule, kuzoba mnandi ukubona ukuthi kwenzekani njengoba ipulatifomu iqhubeka nokuba namandla.
Qala ukuhweba ku-Binance Futures namuhla!
Isexwayiso Sengozi: Ukuthenga, ukuthengisa, ukubamba, noma ukubamba iqhaza ekuhwebeni ngekusasa le-cryptocurrency kungumsebenzi onobungozi obukhulu emakethe.
Como gañar cartos empregando o apalancamento de negociación de marxes de bybit